कञ्चनपुर, असार ७ गते । कृष्णपुर नगरपालिका–२ वनहरा मुक्त कमैया बस्तीका जानकी रानालाई घर खर्च चलाउन धौधौ भएको छ । बस्ती नजिकै बग्ने वनहरा नदीको बगरमा प्रत्येक वर्ष तरकारी खेती गरेर उहाँले आम्दानी लिँदै आउनुभएको थियो ।
उहाँका अनुसार बन्दाबन्दीले गर्दा मजदुरी पाइँदैन । मेहनत गरी लगाएको तरकारीबाट आम्दानी लिन पाइएको छैन । नदीको बगरमा तरकारी खेती गर्दै आएका प्रतिव्यक्तिले वार्षिकरूपमा रु. ७० हजारदेखि एक लाखसम्म कमाउँदै आएका थिए ।
यस वर्ष छिट्टै भएको बन्दाबन्दी र मौसममा आएको परिवर्तनका कारण नदीमा जेठ महिनामै बाढी आउँदा मुक्त कमैया परिवारले बगर खेतीबाट आम्दानी लिन नसकेका हुन् । बगरमा उत्पादित तरकारी बेचेर रु. १० हजारदेखि. रु २० हजारसम्म केही परिवारले आम्दानी गरेका छन ।
“तरकारी खेतीमा लागेपछि मासिक रु. ३० हजार जति आम्दानी आउन थालेपछि यसमै लोभिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बन्दाबन्दीले उत्पादित तरकारी थोरै मात्रै बिक्री हुँदा परिवारको खर्च चलाउन निकै समस्या भएको छ ।”